Uzibeka njani iikekeli kwi-Instagram | Abadali be-Intanethi
Uzibeka njani iikekeli kwi-Instagram
Iris Gamen | 06/04/2022 21:00 | Amaqhinga
I-Instagram inyuse inani layo lokukhuphela kakhulu ukusukela oko yaqala ukubonakala, kwaye ngenxa yesi sizathu iye yaba yenye yezona nethiwekhi zentlalo zisetyenziswayo. Ayisetyenziswanga kuphela ngabasebenzisi ukulayisha umxholo wobuqu, kodwa amagcisa amaninzi kunye neempawu ziyisebenzisa ukubonisa umxholo wentengiso.
Ukulayisha umxholo onomdla kubalandeli bakho linyathelo elilungileyo lokunxibelelana nabo, kodwa kuhlala kulungile ukuya kwelinye inyathelo ukuya phambili. Ukwenza oku, enye yezona ndlela zibalaseleyo onokunikela ngazo ngakumbi kukunika i-Instagram typography. Kweli nqaku, Siza kukufundisa indlela yokubeka iikekeli kwi-Instagram kwaye ubeke isiko kwiiposti zethu.
1 Iifonti ezahlukeneyo kwi-Instagram; ngqindilili, akekeleki, okanye aqhayise
2 Uyitshintsha njani ifonti kwi-Instagram
3 Guqula ifonti kumabali e-Instagram
Iifonti ezahlukeneyo kwi-Instagram; ngqindilili, akekeleki, okanye aqhayise
I-Whatsapp yayiyi-app yokuqala ukwazisa iinketho zokubandakanya iindlela ezahlukeneyo zefonti, kwaye ngoku i-Instagram ixhumele kwi-bandwagon.
Ukuze ukwazi ukusebenzisa ezi zantlukwano zintathu, kufuneka ube nohlaziyo lwamva nje lwesicelo esifakiweyo., kuya kukuthatha imizuzwana embalwa ukuba ukwazi ukonwabela uhlaziyo kunye neendaba zenethiwekhi yoluntu.
Xa uhlaziyo lugqityiwe, Kufuneka ufake kuphela i-Instagram kwaye zombini kumabali nakwiimpapasho ungasebenzisa naziphi na iinguqulelo ezintathu ezinobumba ebesikukhankanyile ekuqaleni, ibhalwe ngqindilili, akekelekanga kunye nestrikethrough.
Kwimeko apho okubhaliweyo kuzakuphawulwa ngokungqindilili, kuya kufuneka uqale kwaye ugqibezele isivakalisi ngomfanekiso weenkwenkwezi, umzekelo *Ukonwabela ulwandle*.
Ngakolunye uhlangothi ukuba into ofuna ukuyongeza kupapasho lwakho yileta ebhalwe bukekela, uya kulandela inkqubo efanayo nakwimeko yangaphambili, kodwa uya kutshintsha iinkwenkwezi zibe ngaphantsi., oko kukuthi, _Ukonwabela ulwandle_
Ekugqibeleni, kukho ukhetho lokubhaliweyo lokuqhawuka. Kule meko, endaweni yee-asterisks okanye ii-underscore, into esiyaziyo njenge-tildes iya kusetyenziswa., ~Ukonwabela ulwandle~
Akunyanzelekanga ukuba usebenzise inguqulelo enye kuphela, kodwa unokuzisebenzisa zonke ngaxeshanye ngendlela elula kakhulu, konke okufuneka ukwenze kukulibala ukuba i-icon nganye ihambelana nantoni.
Ngoku, ukuba ufuna ukuya phambili kule nethiwekhi yoluntu, kuya kuba njalo tshintsha i-typography esetyenziswa yi-Instagram, elula kakhulu kwaye esebenzayo, eyenzelwe umntu kwiprofayile yethu. Kulo mzekelo, sifuna ukuyitshintsha ibe kuchwethezo olukekeleyo.
I-Instagram isebenzisa i-typography engathathi hlangothi, eguquguqukayo kwaye efundeka kakhulu, ukusukela ekubeni yinethiwekhi yoluntu apho sinokuthi songeze iitekisi ezinde nezimfutshane, udinga uhlobo lochwethezo olucacileyo nolufundeka lula.
Ukuba siya kumabali, apho sifumana iintlobo ngeentlobo zeentlobo zefonti esinokuzongeza njengezanamhlanje, neon, umatshini wokuchwetheza kunye nesibindi.
Ukwenza ifonti ngokwezifiso kwi-Instagram yinkqubo elula kunokuba ucinga.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile fumana kwaye ukhethe ijenereyitha yefonti yenethiwekhi yoluntu. Kukho iijeneretha ezininzi ezifana nolu luhlu luncinci esikushiya ngezantsi.
Onke amaqonga esikubize ngawo, azalisekisa umsebenzi ofanayo, lowo wokuvelisa imithombo oza kuyisebenzisa kamva kwi-Instagram.
Kwimeko yethu sihlala sisebenza kunye Iithegi zeMegaNdikhoyo, sikubize ngegama elokuqala. Liqonga ukuba Ikuvumela ukuba ubone kwangaphambili ukuba ifonti isebenza njani, kwaye ke uyazi ukuba ifanelekile na le nto uyikhangelayo.
Iithegi zeMega, xa sele ubhale isicatshulwa osifunayo, ikunika i ukubakho koluhlu lwemithombo eyahlukeneyo ekhoyo. Njengoko besesitshilo ngaphambili, kuxhomekeke kwiimfuno zakho kunye nobuntu bophawu lwakho, uya kukhetha enye okanye enye.
Xa unokhetho lwakho lwefonti olugqibeleleyo, konke okufuneka ukwenze kukucofa kukhetho lokukhuphela. Nje ukuba eli nyathelo lenziwe, uya kuphinda uvule iakhawunti yakho ye-Instagram kwaye uye kwiprofayile yakho apho uya kukhetha iqhosha apho unokuhlela khona iprofayile yakho. Ncamathelisa eli lizwi nokuba kumfanekiso okanye kwibhayolo yakho yobuqu.
Ayikhange ibenzima ngokwenene. Ukuba ufuna ukusebenzisa isicelo kwakhona ukwenza uchwethezo olwahlukileyo lwecursive, sicebisa ukuba wenze njalo Yenza ufikelelo oluthe ngqo kulo naluphi na usetyenziso esilubonisile kwiscreen sakho sasekhaya.
Kubasebenzisi be-Android, kukho usetyenziso olubizwa ngokuba yi Umbhalo oSitayile, usimahla kwaye ikuvumela ukuba wenze okufanayo kodwa ngaphandle kokuvula isikhangeli. Kufuneka uqale ukhuphelo lwayo, ulunike iimvume zokufikeleleka kwaye ubhale amagama ofuna ukuwafomatha.
Kwaye njengakwimeko yangaphambili, xa ufumana isitayile ngokwento oyifunayo, kufuneka nje ukope, uvule i-Instagram kwaye uyincamathisele.
Iifonti ze-Instagram yijenereyitha yeefonti ekuvumela ukuba ubeke iifonti ezikekele ngaphandle kokukhuphela nasiphi na isicelo esongezelelweyo. Kufuneka nje ubhale isicatshulwa sakho, kwaye ukhethe ukhetho lwe okekeleyo kwisixhobo sakho se bar. Kwaye njengakwimeko zangaphambili, kopisha kwaye uncamathisele.
Guqula ifonti kumabali e-Instagram
Sele uyazi ukuba ungayilungisa njani i-typography yoshicilelo lwakho kunye neprofayile, kodwa kwakhona kukho amaqhinga ukuze ukwazi ukwenza amabali akho alungele wena.
Nge Usetyenziso lwe-Hype Text, unokunika isitayile esikhethekileyo kunye nesobuqu kumabali eprofayile yakho. Emva kokuba ukhutshelwe, uya kukhetha umfanekiso ofuna ukuwuhlela, unokongeza kuphela umbhalo, imvelaphi okanye izinto zokuhombisa, kukho iindlela ezininzi zokukhetha.
Xa ukhethe umfanekiso wakho, lixesha lokongeza isicatshulwa. Ngokuxhomekeke kwisicelo osebenza ngaso, uya kukwazi ukusebenza ngeefonti ezininzi okanye ezincinci. Sele ulugqibile uyilo lwakho, kufuneka ugcine indalo yakho.
Umbhalo weHype, ukunika iindlela ezahlukeneyo zokugcina, inokuba kwisixhobo sakho okanye wabelane ngokuzenzekelayo kwi-Instagram okanye kwezinye iinethiwekhi. Yilayishe kumabali akho kwaye wongeze ezinye izinto zokuhombisa.
Nalu uluhlu oluncinci lwe ezinye izicelo onokutshintsha ngazo ifonti yeprofayile yakho.
Sele uyibonile loo nto Ukutshintsha ifonti ye-Instagram ibe yi-cursive okanye enye i-typeface ngumsebenzi olula kakhulu. Olu hlengahlengiso luya kunika izithuba zakho ukujijeka kwaye zigqame kwabanye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Uzibeka njani iikekeli kwi-Instagram